Sebenzisa ngokugcwele umatilasi nge-Springs ngaphakathi ukuze uthuthukise ibhizinisi lakho
Ifonti isetshenziselwa ukufeka umbhalo. I-logo ivame ukwenziwa ngakwesobunxele noma ingaphambili lengubo. I-Decal © kungenye ifomu elisetshenziselwa izembatho zeqembu lezemidlalo ezinamagama nezinamba zabasubathi kanye nama-logo. Kunemithungo embalwa kulo msebenzi. Abakhiqizi abaningi bengubo bahlinzeka ngezinsizakalo ezigqoke izingubo ezahlukahlukene ezinjengezigqoko, amahembe ama-polo, ama-t-shirts
\_ "Imvelo yemvelo yesitayela semfashini, amakhono amaningi omama abamnyama kufanele babumbe izingane zabo ngezinwele zemvelo, futhi izingane zethu azinasengozini enkulu yokuchayeka ngokweqile kumakhemikhali anobuthi, futhi kufanele alwe nalawa makhemikhali anobuthi, ngaleyo ndlela alimaze amandla awo anobuthi uhlelo, \_ "kusho yena. Umthombo: kancane. I-Ly / 2w1llxh Ucwaningo lwezemvelo, online ngo-Ephreli 25, 2018.